Text and Links hidden: Pros And Cons - Soso-kevitra tsotra avy amin'ny Expert of Semalt, Natalia Khachaturyan
Rehefa manao SEO, dia misy tetika mamitaka izay afaka mamitaka (algorithm) fikarohana ho an'ny fikarohana. Ohatra, soratra sy rohy miafina no fototry ny sasantsasany amin'ny fampiroboroboana votoatin-javatra ao amin'ny votoatin'ny fanatanterahana io asa io. Misy fomba maro hanafenana ny lahatsoratra ao amin'ny tranonkala iray. Ny sasantsasany amin'ireo tetika ireo dia omena ao amin'ity lahatsoratra ity avy amin'ny Strategist Content Semalt , Natalia Khachaturyan:
Amin'ny fampiasana loko misy soratra mitovy amin'ny loko ao amin'ny tranokala,
Mametraka lahatsoratra amin'ny sary na lahatsary,
Mametraka sora-baventy kely izay kely loatra,
Mampiasa CSS hametrahana lahatsoratra tsy mivoaka,
Hanafaka permalinkana, ohatra, amin'ny fametrahana azy ireo amin'ny toetra - noleggio gonfiabili brescia.
Amin'ireny tranga ireny, dia mety hampiditra ny votoaty marobe amin'ny fomba tsy hita maso ho an'ny mpitsidika ny tetika toy izany. Ankoatra izany, ny rohy aty amin'ny mari-pamantarana marika toy ny takelaka dia matetika nafenina na tsy hita.
Mamantatra votoaty miafina
Azo jerena amin'ny endriny maro ny votoaty miafina. Amin'izany fomba izany, ny lahatsoratra dia azo jerena amin'ny milina fa tsy hita maso amin'ny mpitsidika olombelona. Ny ctrl + A tsotra dia manampy amin'ny fanasongadinana ny votoaty rehetra ao amin'ny tranonkala iray. Ny mainty hoditra SEO koa dia mety hampiasa loko hafa mitovy amin'ny loko..Amin'ireny tranga ireny, dia tokony haka kopy sy hametahana ny pejy web manontolo amin'ny tonian-dahatsoratra lahatsoratra hafa ianao, amin'ny fampiasana safidy fohy. Ity tetikady ity dia afaka manampy amin'ny famoahana ny votoaty miafina rehetra ao anaty tranonkala iray. Ireo rohy dia afaka miditra ao amin'ny toerana misy azy ireo toy ny tsy fahazoan-dalana amin'ny tranonkala manontolo.
Ny antony mahatonga ny votoaty miafina
Mampiasa votoaty miafina ny olona amin'ny antony samihafa. Ny hevitra mahazatra indrindra ao ambadiky ny fanakanana votoaty ao amin'ny pejin'ny tranonkala dia midika. Ny olona dia manafina teny fanalahidy fanampiny ao amin'ny votoaty miafina mba hanandrana sy hamitaka ny algorithm mba hametrahana ny tranokalanao voalohany. Ankoatra izany, tenifototra maintin'ny SEO ny tetikady SEO izay tena mahasoa tokoa amin'ny fampiasana votoaty miafina. Ny fandefasana teny fanalahidy loatra ao amin'ny pejy web dia mitarika ho amin'ny fihenan-danjan'ny fidirana an-tserasera ary koa ny fisian'ny tranonkala iray.
Ahoana no hahitana ny votoaty hita ao amin'ny tranokalanao?
Ny votoatiny miafina dia mety hitarika amin'ny famaizana tranonkala iray avy amin'ny Google SERPs. Amin'ireo tranga ireo, ny votoaty miafina dia manampy ny olona hahazo fampitandremana marobe momba ny famaritana ny tranonkalany. Ilaina ny hahitako ny votoatinao. Ny sasany amin'ireo fomba hampitomboana ny fahitana ny votoatinao dia ahitana:
Sary: Ny lahatsoratra momba ny soratra dia azo jerena ao amin'ny toetra amam-panahy alt. Ilaina ihany koa ny mampiditra ny fanoratana ny olona am-bava sy ny famaritana ny soratra amin'ny alàlan'ny sary rehetra.
Andininy: Ny lahatsary ihany koa dia mamorona votoatiny izay azo alaina amin'ny fizarana. Azonao atao ny mamoaka horonantsary na mampiditra lahatsoratra manasongadina ny horonan-tsary amin'ny HTML.
Misy fomba maro ahafahan'ny votoaty miafina manimba ny ezaka SEO anao. Ohatra, ny mainty hoditra SEO dia mety hampiasa sekretera miafina mba hanafenana ny fikasan-dalany amin'ny teny fototra. Amin'ny toe-javatra hafa, azon'ny olona ampiasaina ny votoaty miafina ary mandrakotra rohy maromaro amin'ny sehatra samihafa. Ity lahatsoratra ity dia afaka manampy anao hahafantatra ny votoaty miafina ao amin'ny tranonkala iray.